music Archives — njem Lee - Official Site
Na-achị ka Ya,…
Music bụ nnukwu akụkụ nke ndụ m otú m na-eche banyere otú iji ya kacha mma. Ọ na-esiri m ike ịnụ ụtọ nkà na-enweghị nyochasịrị, -edetu, na-ajụ ha ajụjụ. Beyonce nwere na anyị na mba anya ugbu a na ọ bụ ihe doro anya otu nke anyị kasị hụrụ n'anya pop kpakpando. The mbụ na nwaanyị ọbụna kwuru ma ya ga-onye ọ bụla ọzọ, ọ ga-achọ ịbụ Beyonce.
Beyonce bụ ihe na-ewu ewu karịa na ọ na-dịtụbeghị, otú i nwere ike ọ bụghị agbanye TV ma ọ bụ na-online enweghị na-ahụ ihe banyere ya, si reviews nke ọhụrụ ya album na foto nke ya na-eje ije n'okporo ámá na nwa ya nwaanyị. M na-masịrị ya talent na mmụọ nsọ site ya mbanye, ma na m na kwa juru ya anya ịmata ihe ụfọdụ m na-ahụ.
Beyonce na m nwere ihe ole na ole na-ahụkarị. Anyị na-ma site na Texas, ma nwee ọtụtụ ezinụlọ na Houston. Anyị na-ma ndị nka onye na-na na na wepụtara gburugburu otu ọgụgụ nke solo albums (ezie na ọ bụ ihe dị nnọọ ntakịrị ihe a maara nke ọma karịa m). ma lezie, anyị na-na ma mmehie na mkpa nke àmàrà.
N'iburu nke ahụ n'uche, ma ọ bụrụ na m nwere ohere izute ya ndị a bụ ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị m nwere ike…
Ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ, m na-aga azụ na-ege ntị albums na songs na n'ezie mere ka m artistically na n'ụzọ ime mmụọ mgbe m nuru ha. Otu n'ime ndị albums bụ The Solus Christus Project site Shai Linne. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị amasị m Hip iwuli elu ọba- oge. The mmepụta bụ ihe pụrụ iche (ezie na ọ bụghị commerical), ọdịnaya na-atọgbu, na Shai si in-a me nkà bụ na zuru ngosi. Nke a bụ otu n'ime ndị albums na-eme ka rappers-ajụ onwe ha, "Gịnị mere m ka na rapping ọzọ?”
M ike ịgụ ihe e dere dum ndekọ a post, ma a onye nke ọkacha mmasị m amaokwu nke album. Ọ bụ shai si amaokwu "Maị Lelee 1,2″:
O nyere nd Ya dị ka ihe mgbapụta, Na na na mama na m na-ete egwú
Mgbe ịgụpụta m anthems nke Kraịst, Ndị Ezi Omume Nwa Atụrụ-eme ka ìhè m Marina Die
Ọ bụ naanị Jehova nke mba
Nwere ike mama a mba nile aṅụrụma dee enweghị ọbụna otu ihe n'ime onwe-n'ibuli?
My nādighi ike okwu- erughị eru n'ezie kọwaa N'Eburo Mkpụrụ
Kara aka na-eme n'ụzọ ọrụ ebube omume
Mgbe ọ dị afọ iri na abụọ, ọ ochie isi tụrụ ya n'anya Ya ịghọta
Rubere isi Nne na nna ya, ọ bụ ezie na O kere ha ifufe ọkpọkọ
A ezi Anomaly- na onye nwere ike itughari uche na
Ohu alụ ọgụ agwọ…